၁၃ နှစ်စွဲလမ်းမှု၊ သုံးနှစ်တိတိ - သင်၏ ဦး နှောက်သည် Porn တွင်
စွဲလမ်းမှု၏ 13 နှစ်များ,3နှစ်သမ္မာသတိရှိကြလော့
ကျွန်တော့်နာမည်ကဘရိုင်ယန်ဖြစ်ပြီး၊ အသက် ၁၄ နှစ်မှ ၂၇ နှစ်ကြားတွင်ကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းသောစွဲစွဲလမ်းစွဲစွဲလမ်းမှုဖြစ်သည်။ ငါ့ရဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့အလေ့အကျင့်ကြောင့်ငါ့ရဲ့ဘ ၀ မှာအချိန်ကာလတော်တော်များများမှာဆိုးဆိုးရွားရွားညစ်ညမ်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ ED နဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။
ငါ၏အနှစ်လယ်ပိုင်းနှစ်ဆယ်ကျော်အတွက်, ငါ့ ED, ငါ၏ရေရှည်ဆက်ဆံရေးအတွက်ကြီးမားတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုအချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အကြှနျုပျ၏ရည်းစားသူမ၏အလုပ်အကိုင်အဘို့အလအနည်းငယ်များအတွက်တိုင်းပြည်ကိုထွက်သွားလိမ့်မယ်, ဆယ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို tabs များပွင့်လင်းနှင့်အဆက်မပြတ်ငါ့ကိုပယ်ရလိမ့်မယ်လို့အသစ်သောအရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေနေနှင့်အတူငါမလွှဲမရှောင်နေ့စဉ် porn ၏နာရီကိုကြည့်တက်အဆုံးသတ်လိမ့်မယ်။ သူမနောက်ကျောရောက်လာသောအခါ, ငါသည်ဒုက္ခလိင်စဉ်အတွင်းလလောက်စိုက်ထူရတဲ့ခဲ့ - တစ်ဦးကိုမှန်ကန်ရည်းစားနှင့်အတူငါတကယ်မယုံနိုင်လောက်အောင် sexy တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်မတို့ပြိုကွဲပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်မမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြofနာတွေကြောင့်ကျွန်တော့်မှာဘယ်တော့မှအဆင်မပြေတဲ့ဆက်ဆံရေးအနည်းငယ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းငါဒီဆက်ဆံရေးတွေအများကြီးမအောင်မြင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာငါသိတယ် - ငါအဆုံးသတ်တော့ဖြစ်ပေမဲ့
အမှန်အတိုင်းပြောရရင်ကျနော့်ရဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့အကျင့်ဟာငါ့ ED အတွက်အပြစ်ဖို့တာပဲ။ ဒါပေမယ့်ဒီလိုအချက်အလက်မျိုးကိုဘုံအသိပညာမပေးခင်လွန်ခဲ့တဲ့ ၇- ၈ နှစ်ကဖြစ်ခဲ့တာကိုသတိရပါ။ (သတိပြုရန်အချက်မှာဂယ်ရီ၏ဘုံအသိပညာကိုရရှိစေသည့်သူ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ) ကျွန်ုပ်သည်လိင်စိတ်ကုထုံးပညာရှင်တစ် ဦး နှင့် (ငါ့ကောင်မလေးနှင့်ကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းမှုကိုအတူတကွလေ့လာရန် 'အတူတကွကြိုးပမ်းရန်' ကြိုးစားခဲ့သည်) နှင့်ပင်ညှို့ပညာရှင်တစ်ယောက်နှင့်တွေ့ခဲ့သည်။ ငါကညစ်ညမ်း ED ကိုဖတ်ပြီးသည်အထိငါ့ပြproblemနာရဲ့အကြောင်းရင်းကိုနားလည်ခဲ့တယ်။
ညစ်ညမ်းမှုမှကျွန်တော့်ရဲ့ reboot ကတစ်ညလုံးမအောင်မြင်ဘူး ဒါဟာတကယ်တော့ငါလုပ်ခဲ့သမျှထဲမှာအများဆုံး - မပါလျှင်အခက်ခဲဆုံးပဲ။ ဒါကငါစွဲစွဲလမ်းဘယ်လောက်ဆိုးပါတယ်။ အအေးကြက်ဆင်ကိုဖြတ်ဖို့ကြိုးစားမှုအနည်းငယ်ပြီးနောက်၊ ငါ (ဒီအလေ့အထကိုအစားထိုးခြင်း၊ တာဝန်ခံမှုမိတ်ဖက်ရှိခြင်း၊ ဂျာနယ်ထုတ်ခြင်းစသည်) အချို့သောနည်းဗျူဟာများနှင့်အတွေးအခေါ်များကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ညစ်ညမ်းရုပ်ထွက်ကောင်းအောင်ထွက်နိုင်ခဲ့သည်။
ဒါဟာငါနောက်ဆုံးတော့ကျနော်အပြည့်အဝကိုငါ့ ED ၏ "ကုသ" ခံခဲ့ရသည်ဟုပြောနိုင်ကြောင်း (အနည်းငယ် relapses ပြီးနောက်) ငါ၏အ reboot သို့အကြောင်းကို4လစေ့သတည်း။
သင်ဤ site ကိုဖတ်နေလျှင်, သင်ဖြစ်ကောင်းသိကြ ဘာ သင်ပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့င်ပေမယ့်လွယ်ကူသည်မဟုတ်။
ငါလိုနှစ်ပေါင်းများစွာ 'edging' နှင့်အမျိုးအစားတိုးပွားလာ rewire ဖို့ကြိုးစားနေထွက်ယောက်ျားတွေအများကြီးရှိပါတယ်ခန့်မှန်းတာပါ။ ဒါကိုကျော်လွှားနိုင်တယ် အရေးကြီးသောအရာမှာအချိန်ယူရမည်ဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအပြည့်အဝကတိပြုလိမ့်မည်ဟုလက်ခံရန်ဖြစ်သည်။
ငါ porn စောင့်ကြည့်ပါတယ်, ငါ့ဘဝကအပြတ်အသတ် သာ. ကောင်း၏ကတည်းကဒါဟာယခုနီးပါး3နှစ်ပေါင်းခဲ့ပါတယ်။ ငါဂရုစိုက်လူတို့နှင့်အတူဖြုန်းဖို့ဤမျှလောက်အချိန်ပိုမိုရှိသည် ဖြစ်. , ပိုပြီးအာရုံစိုက်နှင့် willpower; နှင့်သင်တန်း၏, ငါ့အလိင်ဘဝကဖြစ်ဖို့အသုံးပြုထက်အဆတစ်ထောင် သာ. ကောင်း၏။ pixels ရုံကိုမှန်ကန်မိန်းမတို့အားမနှိုင်းယှဉ်ပါနဲ့။
ငါ့ကိုငါ့အ reboot အတွက်အောင်မြင်သောဖြစ်ကကူညီပေးခဲ့သော tools များနှင့်မဟာဗျူဟာများကိုမျှဝေချင်ခဲ့တယ်, ဒါကြောင့်ငါ porn, PIED ကျော်လွှားနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်ဖြတ်အကြောင်းကိုရေးဖို့ရာဝက်ဘ်ဆိုက်, စတင်ခဲ့: www.rebootblueprint.com
အခမဲ့လှုံ့ဆော် mp3: သှေးဆောငျခံရတဲ့အခါမှာဒီရန် Listen
မကြာသေးမီကငါ PMO အဘို့မတရားသောသူယောက်ျားတွေကိုကူညီမယ့်ပညာရှင်ပီသစွာမှတ်တမ်းတင်ထားသော mp3 ပြန်တမ်း။ ဒါဟာ "ဒီတဏှာနယ်" ဟုခေါ်ထားပါတယ်။ cheesy, yeah ။ ငါသိတယ်။ 🙂
သင့်ရဲ့ reboot အပေါ်ကံကောင်းပါစေနဲ့ကျွန်မမကြာမီနောက်ကျောကဒီမှာဖြစ်လိမ့်မယ်!